Rep. Ilhaan Cumar ayaa taageero u muujisay Kurdiyiinta Turkigu dagaalka kula jiro - Awdinle Online
Rep. Ilhaan Cumar ayaa taageero u muujisay Kurdiyiinta Turkigu dagaalka kula jiro
October 26, 2019 (AO) – Ilhan Cumar oo ka mid ah Xildhibaanada Mareykanka ayaa taageero u muujisay Kooxaha Kurdiyiinta ee Turkigu uu dagaalka kula jiro.
“Waa in aan joojino hubeynta iyo taageeridda maamulada aan naxariista lahayn, waana inaan eegno shuruucdeena dibadda ee meelaha anan u adeegsanayn nolosha iyo bini-aadamka dhibban”ayey tiri iyadoo ka hadleysay duullaanka Turkiga ee Suuriya.
Turkiga ayaa “si khasab ah” dib ugu celinaya qaxootiga Suuriya oo la geynayo xuduudda, si loo dejiyo “aagga nabadda ah” in kastoo dagaalka uusan weli dhammaan, sidaas waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters oo sii xigatay hay’dda u doodad xuquuqda aadanaha ee Amnesty International.
Hay’adda kale ee xuquuqda u dooda ee Human Rights Watch waxay sidoo kale sheegtay in “mamulka uu si aan kala sooc lahayn u xir-xirayo una musaafurinayo tobannaan qof oo Suuriya u dhalatay kuwaas oo la geeyay Waqooyiga Suuriya, muddadii u dhexeysay January iyo September” ee sannadkan.
Previous articleNin Soomaali ah oo soo galay diiwaanka dadka ugu saameynta badan UK
Next articleMaamulka Gobolka Nugaal iyo Wax-garadka Garoowe ayaa digniin adag u diray Wakiiladda Puntland